Abɔfo ne Adaemone—Honhom Abɔde Nneyɛe Betumi Aka Wo | Bible Kyerɛkyerɛ
2 Bible ka abɔfo ho asɛm mpɛn ɔhaha pii. Ma yensusuw wɔn ho nsɛm a wɔaka no kakraa bi ho nhwɛ. Hena na ɔbɔɔ abɔfo? Kolosefo 1:16 ka sɛ: “Wɔnam [Yesu Kristo] so na ɛbɔɔ nneɛma a aka nyinaa wɔ soro ne asase so.” Enti, Yehowa Nyankopɔn nam N’abakan no so na ɔbɔɔ honhom abɔde a wɔfrɛ wɔn abɔfo no nyinaa. Abɔfo dodow ahe na wɔwɔ hɔ? Bible kyerɛ sɛ wɔbɔɔ abɔfo ɔpepehaha pii, na wɔn nyinaa wɔ tumi.—Dwom 103:20. *
5 Abɔfo baanu boaa ɔtreneeni Lot ne ne mmabea ma wonyaa nkwa wɔ Sodom ne Gomora nkurow bɔne no sɛe mu denam wɔn anim a wodii ma wofii saa beae hɔ no so. (Genesis 19:15, 16) Mfehaha pii akyi no, wɔtow odiyifo Daniel too agyata amoa mu, nanso hwee anyɛ no na ɔkae sɛ: “Me Nyankopɔn asoma ne bɔfo ma wabemuamua agyata no ano.” (Daniel 6:22) Wɔ afeha a edi kan Y.B. mu no, ɔbɔfo bi koyii ɔsomafo Petro fii afiase. (Asomafo Nnwuma 12: 6-11) Afei nso, abɔfo boaa Yesu wɔ n’asase so som adwuma no mfiase. (Marko 1:13) Na aka bere tiaa bi ama Yesu awu no, ɔbɔfo bi baa ne nkyɛn ‘bɛhyɛɛ no den.’ (Luka 22:43) Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɛno yɛɛ awerɛkyekye maa Yesu wɔ n’asetra mmere a na ɛho hia paa no mu!
6 Ɛnnɛ, abɔfo nyi wɔn ho adi nkyerɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ asase so bio. Ɛwom sɛ nnipa nhu Onyankopɔn abɔfo a wɔwɔ tumi no de, nanso wɔkɔ so bɔ Onyankopɔn nkurɔfo ho ban, ne titiriw no, wɔ biribiara a ɛbɛsɛe ɔsom a wɔde ma Onyankopɔn no ho. Bible ka sɛ: “[Yehowa, NW] bɔfo bɔ wɔn a wosuro no ho nsra hyia, na ogye wɔn.” (Dwom 34:7) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ saa asɛm yi yɛ awerɛkyekye kɛse ma yɛn? Efisɛ ahonhommɔne a wɔn ho yɛ hu a wɔpɛ sɛ wɔsɛe yɛn wɔ hɔ! Wɔne henanom? Ɛyɛɛ dɛn na abɔfo bi bɛyɛɛ abɔfo bɔne? Ɔkwan bɛn na wɔpɛ sɛ wɔfa so yɛ yɛn bɔne? Nea ɛbɛyɛ na yɛanya mmuae no, ma yensusuw biribi a esii wɔ nnipa asetra mfiase ho kakra nhwɛ.
10 Adaemone no nam ahonhonsɛmdi so daadaa nnipa. Ahonhonsɛmdi yɛ adaemone a obi ne wɔn di nkitaho tẽẽ anaasɛ ɔfa ɔdebisafo bi so yɛ saa. Bible kasa tia ahonhonsɛmdi, na ɛbɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛntwe yɛn ho mfi biribiara a ahonhonsɛmdi wom ho. (Galatifo 5:19-21) Adaemone no de ahonhonsɛm di dwuma sɛnea mpataayifo de nam hyɛ darewa ano yi mpataa no ara. Mpataayifo de nam ahorow na ɛhyehyɛ darewa ano de kyere mpataa ahorow. Saa ara nso na ahonhommɔne nam ahonhonsɛmdi ahorow so nya nnipa ahorow nyinaa bi so nkɛntɛnso.
17 Ɔkwan foforo bɛn na na ɛsɛ sɛ Kristofo a wɔwɔ Efeso no fa so? Ná wohia ahobammɔ foforo efisɛ na wɔte kurow a adaemonesɛm ahyɛ mu ma mu. Enti Paulo ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa mpaebɔ ne ɔsrɛ nyinaa mmɔ mpae bere biara wɔ honhom mu.” (Efesofo 6:18) Esiane sɛ yɛn nso yɛte wiase bi a adaemonesɛm ahyɛ mu ma mu nti, Yehowa a yebefi komam abɔ no mpae de ahwehwɛ ahobammɔ no ho hia na ama yɛatumi ako atia ahonhommɔne. Ne saa nti, ɛsɛ sɛ yɛbɔ Yehowa din wɔ yɛn mpaebɔ mu. (Mmebusɛm 18:10, NW) Enti, ɛsɛ sɛ yɛkɔ so bɔ mpae sɛ Onyankopɔn ‘nnye yɛn mfi ɔbɔnefo’ Satan Ɔbonsam “nsam.” (Mateo 6:13) Yehowa betie mpae a ɛte saa a yefi komam bɔ no.—Dwom 145:19.
^ nky. 2 Adiyisɛm 5:11 ka abɔfo pa ho asɛm sɛ: “Wɔn dodow yɛ ɔpedudu ne mpempem huhaa,” anaa “ɔpepem huhaa.” Enti Bible kyerɛ sɛ wɔbɔɔ abɔfo ɔpepehaha pii.
Share Share Honhom Abɔde—Sɛnea Wɔn Nneyɛe Ka Yɛn
bh ti 10 kr. 96-105